Ciidamada Kenya oo Soomaaliya sii joogi doona – Radio Daljir
Ciidamada Kenya oo Soomaaliya sii joogi doona
Seteembar 30, 2015 8:20 b 0
Arbaco, September 30, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyaasha caalamka ee ka qeybgalaye shirka golaha guud ee QM ka hor balanqaaday in dowladiisu ay xoojin doonto dagaalka AL-shabab iyo sidii AL-shababab loo wiiqi lahaa.
Kenyatta ayaa diirada ku saaray qudbadiisa arimaha Somalia isagoo madaxda Caalamka umuujinaye in Kenya ay daacad katahay Hormarka iyo Nabada Soomaaliya.
Wuxuu sheegay Madaxweynaha Kenya in xoogaga Kenya ee kusugan Soomaaliya ay sii wadi doonaan howlgalada Al-shabab lagula dagaalamayo iyagoo caawinaya ciidamada Qaranka Soomaliya iyo kuwa Midowga Afrika.
Isagoo caalamka umuujinaya in Kenya ay dhaqaalo badan ay kubixiso dagaalka AL-shabab ayuu Kenyatta kasheegay shirka 70 ee golaha guud ee qaramada midoobe in billions Kenya Shillings ah ay kubixiyeen dagaalka Al-shabab, uguna baaqay hogaamiyaasha caalamka inay dhan uga soo wada jeestaan dagaalka kadhanka ah Shabab.
“Si gaar ah waxaa muhiimad uleh inaan diirada saarno xagjireynta dhalinyarada , iyadoo hadii aan fiirsano ay noqonayso caqabad adag” ayuu yiri Mr Kenyatta.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Khamiis_01
Madaxweynaha Somaliya oo Sheegay in Guulo laga Gaaray Dagaalka Al-shabaab